I-Vbookz, umdlali obalaseleyo we-iPad / iPhone / iPod - Geofumadas
I-Vbookz, umdlali obalaseleyo we-iPad / iPhone / iPod
NgoJuni, 2013 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Izicelo zokufunda ngokuvakalayo zitshintsha indlela esithandayo ngayo iincwadi, ngokungathandabuzekiyo.
Ngokukodwa, ndihlala ndiyathanda ukuthabatha umlomo kunye neenkcukacha zecala nencwadi yokwenene, yeka kwaye ufunde ngokukhawuleza ukugubungela iprose efanelekileyo. Kodwa akuzange kwenzeke kum ukuba ukuhamba uhambo kungasetyenziselwa ukufunda.
I-Vbookz iyona nto ibhetele endiyifumeneyo, ukuba unencwadana yedijithali yencwadi. Ngoku ndiyathetha ngeenzuzo:
Bobabini ukhetho lwezwi lomntu kunye nolwabhinqa luyinto engokwemvelo ukuba landiyekile. Ukongezelela kolwimi lwesiSpanish kukho ezinye iilwimi ze-15 (akuyena umhumushi) oquka isiPutukezi, isiJamani, isiNtaliyane, isiFrentshi, isiNgesi esivela kwi-United Kingdom kunye nesiNgesi e-United States.
Emva koko, unokhetho lokutshintsha isivinini sokufunda esenza izimanga.
Kwaye ngelixa ufunda, ukugqwesa kuqhubela phambili kwiglasi ephakamileyo nangona ingahle isetyenziswe ngokuphuzi.
Kukuxabisa, okugcina ikhefu xa uvalela isicelo, kunye neyonto engaphumelekanga yindawo esiya kuyo. Ndiyakhumbula ukuba ngeSodels sinobu buthathaka, kuba bekufuneka sikhethe umxholo, uze ukope uze uqale, ngoko ukhetha uxwebhu lonke luye lanciphisa isiqalo kwaye ukuba saguqulele itekisi ekulalelwayo akukho ndlela yokulawula ikhefu.
Umfundi omhle, kungekhona kuphela kwi-audio.
Ingasetyenziselwa ukufunda ngaphandle komsindo, ngoko kufuneka usebenzise iminwe yakho kuphela ukuba ukhethe ubungakanani befonti kwaye icatshulwa ukuba lufunde ngendlela yendabuko.
Unakho ukhetho lokwenza uphando lweetekisi, kunye ne icon icon. Ifomathi yefomati ilwa ne-dyslexia ... inomdla.
Oku kukuhle. I-Sodels yayinobungozi bokuthi igama okanye i-txt version iyadingeka. Kwaye nangona kunjalo ukuba inokuguqulwa, kwiimeko ezininzi kwakucaphukisa ukuba ndifunda inombolo yecala, unyawo okanye uhamba. I-Vbookz ifunda kuphela itekisi, ngokwemvelo.
Kwimeko yefayili yegama, kufuneka uguqule kwi-pdf, enokuyenza ngokulula ngeMakhasi okanye kwiLizwi.
Ixhasa imodi yokulala, ngoko akufuneki ukuba nesicelo kuphela kwaye iqhutywe ngasemva. Kuthetha ukuba, sinokusebenzisa ezinye izicelo ngenkathi sifunda, okanye sishiywa ngaphandle kokuyeka. Nokuba kukho enye i-audio-kind audio audio, akukho khefu; ukuba sisebenzise umculo okanye i-audio eqhubekayo xa imiswa.
Ungakwazi kwakhona ukuba nomculo wesiqhelo ngelixa ufunda, yintoni umyalelo womnye wabacebisi bam abacebisa umculo omncinci njengonyango ukufezekisa ukufunda okungakumbi. Kwaye inkcazelo enomdla, kunokwenzeka ukwabelana ngamagama nge Facebook.
Ndichulumancisile kuhambo lweentsuku ezimbini, ngelixa ukuqhuba ndikwazile ukufunda "Balisa ngokuyixela" nguGarcía Márquez. Ndikhumbula ukuba ndiyithengile le ncwadi kodwa andikaze ndiyifunde iphelele, ngoku, ndikhuphe nje i-pdf kwaye ndikulungele ... ukufunda ukuyithatha. Nangona ngoku kundifikeleyo ukukhuphela iincwadi zasimahla kwithala leencwadi Gutemberg.
Intlungu engayixhasi iifomu ze-DRMed okanye iPub, ezivimbela ukufunda iifayile zeFom, kodwa mhlawumbi kamva. Ukongezelela kukho izicelo ezininzi ezivumela ukuguqulwa.
Ukusuka apha banakho khuphela i sicelo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Inkcazo yokuhlaziywa kwee-cadastral zasezidolophini
Post Next Iindaba ze-3 SupergeoOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 kwi "Vbookz, umdlali obalaseleyo we-iPad / iPhone / iPod"
ISpeyin esuka eSpain
Isilwimi isiSpeyin esivela eSpain? Latino?